Inzuzo - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Njengomhlinzeki wemishini yokupompa osekusungulwe isikhathi eside, inkampani yethu iqinisekiswe izitifiketi eziningana zezimboni ezinjengalezi ezibalulekile ezilandelayo:
Emkhakheni wezinto zokumpompa, inkampani yethu ivelele kozakwabo ngezizathu ezilandelayo:
1. Izindleko Zokukhiqiza Eziphansi Nentengo Enengqondo
Akhiwe enkabeni Chinese futha yokukhiqiza umkhakha, Shijiazhuang idolobha, inkampani yethu isungule professional slurry isitshalo. Njengoba okokusebenza kwamayunithi wokumpompa, insimbi ijabulela intengo ephansi lapha, izindleko zethu zokukhiqiza zincishiswe kakhulu. Yingakho singanikeza amaphampu athembekile ngamanani aphansi. Ngaphezu kwalokho, isisekelo sethu sokukhiqizwa kwepompo ye-petrochemical siseDalian futhi kunabasebenzi abaningi abanolwazi nabasebenza kahle.
2. Umkhiqizo Onokwethenjelwa Nekhwalithi
Njengomkhiqizi wemishini yokudonsa, sihlala sinamathela kumthetho wezobuchwepheshe nekhwalithi eza kuqala. Onke amaphampu aklanywe futhi akhiqizwa ngamasu nasemishini esezingeni eliphezulu emhlabeni jikelele. Ngasikhathi sinye, sinikezela ngemikhiqizo elungiselelwe eyenzelwe ngokuya ngezidingo eziguqukayo zamakhasimende ethu. Siyathembisa ukuthi wonke amaphampu esiwahlinzeka kuwe athokozela ukusebenza okuhle kakhulu nokusebenza okuthembekile.
Ukuze uqiniseke ukuthi amayunithi ethu okudonsa ahlinzekwe ngokuphelele anelisa izidingo zakho, sisungule indlela ehlelekile yokulawula ikhwalithi. Singanikela ngemikhiqizo eqinisekisiwe kumaka we-CE, amazinga we-ISO9001 noma amanye amazinga wezimboni. Okwamanje, singanikeza irekhodi lokulawulwa kwekhwalithi nombiko ohlobene kuwe uma kunesidingo, njengokuthi "umbiko wendawo nempahla yamakhemikhali wezinto zokwakha izingxenye ezinkulu zepompo", "umbiko wokulinganisa we-rotor", "umbiko wokuhlolwa kwe-hydrostatic" kanye "nombiko wokuhlola wangaphambi kokulethwa" . Sekukonke, sithatha konke ukuxhumana kokulawulwa kwekhwalithi ngokungathi sína, siqinisekisa ukuthi iyunithi ngayinye yokudonsa ukuze ijabulele ukusebenza okuhle nokusebenza okuthembekile.